ROSHMI BANIK (BIGG BOSS 12) အသက်၊ မိသားစု၊ ရည်းစား၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်အခြားအရာများ - အဖြစ်မှန်ပြ
Roshmi Banik (Bigg Boss 12) အသက်၊ မိသားစု၊ ရည်းစား၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်အခြားအရာများ
အဓိက / အဖြစ်မှန်ပြ
နာမည်အမှန် Roshmi Banik
ကျော်ကြားသည် Bigg Boss 12 တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း
ပုံတိုင်းတာမှုများ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) 32-26-34
ဆံပင်အရောင် အလင်းရောင် Ash Brown
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် Shri Shikshayatan ကောလိပ်, ကတ္တား
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့ (BBA)
ဝါသနာ သီချင်းဆိုခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း
အကြိုက်ဆုံးအားလပ်ရက် Destination မိုင်ယာမီ
အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင် Ranbir Kapoor က
အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး Priyanka chopra
အကြိုက်ဆုံးတီဗီရှိုး Bigg သူဌေး
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) မသိ
Roshmi Banik နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသိနည်းတဲ့အချက်အလက်အနည်းငယ်
Roshmi Banik ဆေးလိပ်သောက်လား။ မသိဘူး
Roshmi Banik သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား။ မသိပါ
၂၀၁၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် Bigg Boss Season 12 ပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူသည်ပြပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်သူမ၏အိပ်မက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Roshmi Banik သည်ယခုရာသီတွင်သူမမျှော်လင့်ထားသည့်အရာများအကြောင်းပြောဆိုသည် @BiggBoss , ဂိမ်းနှင့်အကြား၌အရာအားလုံးကစားရန်သူမ၏ဂါထာ! သငျသညျထဲမှာသူမ၏စောင့်ကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေလျှင် # BB12 အိမ်၊ @Justvoot app နှင့်သူမ၏အဘို့အမဲပေး။ # BiggBoss12 pic.twitter.com/PqgNTLG42W
- Bigg Boss (@BiggBoss) စက်တင်ဘာ 15, 2018
သူမ entered ဝင်ခဲ့သည် Bigg Boss 12 her ရန်သူ Mital Joshi ကိုပြဇာတ်အဖြစ်ပြပါ။ သူမနှင့် Mital သည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများဖြစ်သော်လည်းမကြာမီ Roshmi သည် Mital ၏ရည်းစားနှင့်အဖော်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လမ်းခွဲခဲ့သည်။
ဒီနေရာမှာ Mital Joshi နဲ့ Roshmi Banik တို့အကြားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုတချက်လောက်ကြည့်ပါ။ Agar ye #VichitraJodi hai aapko pasand, အထဲဝင်ပါ @Justvoot သူတို့အဘို့မဲပေး! # BiggBoss12 # BB12 pic.twitter.com/xQQPahDGgt
စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် ၂၀၁၈ တွင်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Mital Joshi ကို Bigg Boss ရာသီ ၁၂ ရက်၏မဖွင့်နေ့ကပြပွဲမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမနှင့်တွဲဖက်ခဲ့သည်။ Kriti Verma သူမနှင့် Bigg Boss အိမ်သူအိမ်သားဝင်ကြ၏။
Woh sadasya jo jayenge လုပ်ပါ # BB12 ghar ke andar hai #RoshmiBanik ရွှေ #KritiVerma ။ # BB12 # BiggBoss12 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/SsnfjG0fwS
- COLORS (@ColorsTV) စက်တင်ဘာ 16, 2018
Roshmi Banik ၏အသက်တာ၏ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကိုကြည့်ရှုရန်, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ။
akshay kumar အမည်နှင့်ဇာတ်
စင်တီမီတာအတွက် Katrina Kaif အမြင့်
Lady Gaga မွေးဖွားသည့်ရက်စွဲ
anushka shetty ခင်ပွန်းသည်ကားအဘယ်သူနည်း
ခြေမ Karan johar အမြင့်